I-Offshore Asset Protection Trust - Isehlukaniso, Izindleko Namasu
I-Offshore Asset Protection Trust
Uma kukhulunywa ngokuvikela izinto empilweni oyisebenzele kanzima, kungenzeka uyazi ukuthi udinga okuhle uhlelo lokuvikela impahla. Uhlelo lwakho kufanele luvikele imali yakho, impahla, imali, noma ezinye izinto ezibalulekile zomndeni wakho nezizukulwane ezizayo. Ukwakha uhlelo olusebenzayo lwezimpahla ezibalulekile kungaba nzima ngaphakathi e-United States. Amathuluzi asemthethweni awanamandla futhi ijaji laseMelika elisebenzisela imiphumela lingawaxosha. Ngakho-ke, ekuhlelweni kokuvikelwa kwempahla okuqine kakhulu abantu abaningi emazweni aseNtshonalanga baphendukela esakhiweni sokuvikela impahla ngaphandle kwemingcele yesizwe. Futhi elinye lamathuluzi aqine kakhulu ukuvikela amafa ezinkingeni zomthetho ukuthembeka kokuvikela impahla ye-offshore yakhelwe kahle endaweni efanele.
Ithemba lokuvikelwa kwempahla kude nolwandle lingaba yindlela ephumelelayo yokuvikela izimpahla zakho futhi uqinisekise ukuthi uthola okuningi kuzo. Kepha kuyini ukwethenjwa kwempahla yolwandle? Kufanele udale kuphi? Kungani kungcono ngempela? Lo mbhalo uzohlola izimpendulo zaleyo mibuzo futhi uchaze ezinye zezindlela zokucabanga nezindlela zokwakha i ukwethenjwa kwe-offshore.
Ividiyo evela kithi Abahleli Bokuvikela Impahla oxhumana nabo.
Yini i-Asset Protection Trust?
Ngaphambi kokuthi sihlole ukusetha ukwethenjwa kwempahla yokuvikeleka kwezilwandle, ake sixoxe ngokuthi iyini ngempela ukuvikelwa kwempahla. Investopedia ichaza ukuthembeka kwempahla njengemoto yokuphatha izimpahla zomuntu. Le moto ngokuyinhloko ivikela lezo zimpahla kubabolekisi. Lapho ukwethenjwa kusethwe kahle, leli thuluzi lezezimali ligcina abakweletwayo bengekho. Ngenye indlela, ivumela abakweletwayo ukuthi bakwazi ukuhlala nabakweletayo ngemibandela evumayo futhi bagweme ukumangalelwa okubizayo.
Onke ama-trust atholwe emicimbini emithathu ebalulekile: i-makazi (ebizwa nangokuthi yi-trustor noma umxhasi), umphathi ophethe kanye nomuntu ozuzayo. Indawo yokuhlala yiyo edala ukwethenjwa. Indawo yokuhlala inikela ngempahla evikelwe yithemba. Umgcini ophethe ukuthembeka ulawula ukwethenjwa ngemuva kwendalo ukuze kusizakale ozuzayo. Ozuzayo uthola ukwabiwa okuvela ethembeni. Lokhu kusatshalaliswa kwenzeka ngokubona komphathi, enenhloso yokuqala yenhloso.
Ukwethenjwa noma ukubuyiselwa?
Ukuze i-trust ifaneleke njengethemba lokuvikelwa kwempahla, kumele ingaphindeki. Lokho kusho ukuthi ngemuva kokuqalwa kwe-trust, umuntu angeke akwazi ukukushintsha kalula noma ukukukhansela ngqo ngaphandle kokungenelela kwe-trustee. Nasi isizathu. Uma umhlali noma umzuzi engenza ushintsho ngqo, ijaji lingaphoqa lowo muntu ukuthi aguqule lowo ozuzayo abe yisitha somthetho sawo. Ngakho-ke, ukukwenza kungaphenduleki kubeka umkhawulo emandleni wenkantolo wokuphoqelela ushintsho kulimaze amaqembu athembeke. Isigaba somthetho sokusebenzisa imali sivimbela abazuzi ekuqedeni i-trust noma ethembisa izinkokhelo kubantu besithathu. Lo mshwana uvikela nefa lomuntu ozuzayo ekuhlaselweni okweletwayo.
Yizizwe ezimbalwa kuphela e-US ezivumela ngokuphelele ukuthembela kwempahla. Ezinye zezithandwa kakhulu yi-Alaska, Delaware, Nevada kanye naseNingizimu Dakota. Amazwe ambalwa anikezwayo anikela ngalezi zethembiso ngomkhawulo. Umuntu ngamunye angamisa ukusekelwa kokuvikela impahla empahleni abangahlali kuyo. Kepha wonke amabhizinisi asendlini asebenza ngaphakathi komthetho wasekhaya. Ngakho-ke, umahluleli waseCalifornia angahle anganaki imibandela yokuvikela impahla ye-Nevada trust. Ijaji laseMelika linamandla phezu kwe-US trustee ne-US trustee. Amajaji aseMelika anamandla amancane okuphatha abaphathi bamanye amazwe. Ngakho-ke, ukuvikela okungcono, ubumfihlo, kanye nezinzuzo, ukukhetha okungcono kakhulu kuvame ukuya olwandle. Sakha amathrasti okuvikela impahla ye-phesheya lapho inkampani yethu yezomthetho yangaphesheya isebenza njenge-trustee.
Kungani Uyosebenza Esegwini?
Njengoba kushiwo esigabeni esedlule, ungaqala ukusetha ukuthembeka kwempahla khona lapha e-US, kungakhathalekile ukuthi uhlala kuphi. Kungani udlula ekuhluphekeni kokufaka izimpahla zakho ekuthenjweni kude nolwandle? Njengoba Nomad Capitalist uyachaza, kunezizathu ezimbili ezibalulekile zalokhu: ubumfihlo nokuvikelwa.
Lapho kusungulwa i ukuthembela okukude nolwandle ukuze kuvikelwe impahla, kuqokwe umphathi. Umphathi olawula impahla, aphathe izihloko, futhi abhekele impahla nanoma yiziphi ezinye izimpahla ezibekwe ethembeni. I-trustee yenza lokhu ngendlela evimbela ukuthi owethembayo nalowo oxhasayo aphume kumarekhodi omphakathi. Ukusungula i-trust phesheya kwezilwandle kunikeza nokuvikelwa okwengeziwe enkantolo yakho yasendaweni. Kubuye kube nentela njengoba intela ye-trust yasolwandle akujwayelekile ukungathathi hlangothi. Ngakho-ke, ayikhuphi noma inciphise izintela zakho.
Ngaphandle Kokufinyelela Kwezinkantolo Zasendaweni
Ngaphezu kwalokho, kuvimbela ijaji ezweni lakho ekufuneni ukuthi ophathekayo akhulule imali noma izimpahla kumkweletu. Futhi, abaphathi bamanye amazwe abekho ngaphansi kwezinkantolo zasemakhaya. Uma okweletwayo efune ukulandela lezo zimpahla, kuzodingeka ukuthi adlule emzabalazweni omude futhi obiza kakhulu ongaphansi komthetho wethrasti lolwandle. Futhi, kuzodingeka balwe impi esemkhathini onobungani. Lokho kuvimbile okuqinile kwababolekisi.
Ukuphepha kwempahla okukuwe nolwandle kukuvumela ukuthi usakwazi ukufinyelela izinzuzo zamafa akho. Ngasikhathi sinye, iyabavikela ezizukulwaneni ezizayo zomndeni wakho. Leli thuluzi lezezimali livumela elinye iqembu, umphathi wakho, ukululeka ngezindlela zokukhulisa impahla ebanjelwe ethembeni. Into eyodwa okufanele uyiqaphele, ukuthi izindleko zokuthenjwa zokuvikela impahla ingaba phezulu kancane kunezindleko zokusetha a ukuthembeka kwempahla yasekhaya. Kepha khumbula, intengo yilokho okhokha. Inani yilokho okutholayo. Ukwethembana kwasekhaya kungaba kushibhile. Kepha uma ijaji liphoqa umphathi wakho wase-US ukuthi anikeze zonke izimpahla zakho, ukwethenjwa okukude nolwandle kungaba yindlela ebiza kakhulu.
I-Offshore Asset Protection Trust yesehlukaniso
Lapho ubhekene nesehlukaniso, cishe yonke into onayo iba sengozini ngaphandle kokuthi uvikelekile okufanele. Kusetshenziswa ukuthembana ukuvikela impahla esehlukanisweni ukunyakaza okuhle ngoba lezo zimpahla zihlukanisa ubunikazi kuwe, umkhondli, njengoba Forbes uyachaza. Ithemba lokuvikelwa kwempahla linikeza ubunikazi baleyo mpahla ngokwayo, ukuze ifa lingafakwanga ekunqumeni i-alimony noma ukwahlukanisa impahla. Amanye ama-trust aze anikeze nemishwana ecacile ebeka ukuthi umuntu oshade naye esikhathini esizayo akanaso isimangalo ngokumelene nempahla ethembekile.
Uma ungumnikazi webhizinisi, lokhu kungazuzisa ikakhulukazi. Ama-trust trust avikela impahla ye-Offshore ahlinzeka ngokuvikela izinto eziningi, kufaka phakathi i-C Corporations, Company Liability Companies (LLCs), kanye ne-Partnership ekhawulelwe. Lapho kuba nokuhlasela okusemthethweni, kungcono ukuguqula lezi zinkampani ezifuywayo zikwenze zangaphandle. Lokhu kungenxa yokuthi amajaji asekhaya anegunya phezu kwezinkampani ezifuywayo. Ama-trust aseyili aphesheya kwezilwandle awukona ukukhetha okuhle kwama-S Corporations, ngoba abantu basekhaya kuphela nezinhlobo ezithile zama-trust asekhaya angaba nazo. Ngokubambisana, i-offshore LLC kanye nokwethenjwa kwempahla yokuvikela olwandle kunganikeza usizo olukhulu kakhulu nokuvikelwa okuqinile.
Uma, esikhundleni sokuxazulula izindlu, ungumzuzi we-trust, usengaba nokuvikelwa ngesikhathi senqubo yesehlukaniso. Ozuzayo we-trust ebambelela ngokuqondile ngeke akhiphe izinkokhelo ezivela kuye ngokwethembana. Ukuthenjwa kuphethwe kuphela ngumphathi, futhi ukuphathwa kwabazuzi kwephula imigomo yetrasti. Njengoba abazuzayo bengeke nje badele ukuthembela kwabo njengomthombo wemali eyengeziwe noma nini lapho bafuna, leyoholo ngeke yaziwe ngabo ngezinhloso zokuthola i-alimony.
Imithetho kanye Nemishayo
Ngokwengeza isigatshana sokusebenzisa imali esishiwo ngenhla, kuneminye imigatshana embalwa okufanele uyicabangele lapho wenza ukuthembeka kwakho kwempahla okuvela phesheya. Lawo magatshana ongeziwe asiza ukuvikela ukuthembeka futhi aqinisekise ukuthi ayasebenza uma kuvela izindaba, I-BizFilings uchaza.
Isigaba esisodwa esibalulekile yigatshana elwa ne-anti-duress. Lapho kudalwa, lo mgatshana uvimbela ifomu lama-trustee enza ukusatshalaliswa kwetrasti lapho owethembayo noma ozuzayo enza isicelo sokuhoxa elungisa isimo. Igama elithi “duress” yilapho umuntu okweletwayo enze isimangalo noma ethola isahlulelo ngokumangalela noma kumzuzi ngaphandle komthetho wakwelinye izwe. Izinkantolo zifuna ukubuyiselwa kwemali. Lesi sigaba somthetho sivimbela nalowo obolekayo ukuba enze isimangalo ngalezo zimpahla ngaphandle kokuthola isahlulelo esisha endaweni engaphesheya kwezilwandle. Futhi ukuthola ukwahlulela kude nolwandle kulwa impi ekhuphukayo. Le mithetho yezindawo ziyizindawo ezingemnandi kakhulu kwabakweletwayo njengoba imithetho ihlanganiswa ngocele okweletayo.
Ukuvikela Kanjani Umvikeli Wakho
Eminye imishwana ifaka isigatshana somvikeli wokuthembela, isigatshana sendiza nokukhethwa kwesigatshana somthetho. Isivikelo somvikeli somthengi siveza umvikeli wokwethenjwa onamandla okususa i-trustee. Kwezinye izimo, umvikeli angaveza ezinye zezenzo zomphathi. Isigatshana sendiza sivumela umphathi ophethe ukuhambisa ukuthembela kolunye uhlangothi. Imvamisa, isigatshana sendiza siqala ukusebenza uma okweletwayo enquma ukufaka isudi kulawulo lwaphesheya.
Okokuqala, lowo obolekayo usebenzisa sonke isikhathi nemali ukufaka icala lokuya ngasolwandle. Ngemuva kwalokho, umkhokheli we-trustee angavele ahambise ukuthembela kolunye uhlangothi futhi enze ukuba angaphinde afinyelele. Ukukhethwa kwesigatshana somthetho kuyachaza ukuthi ukwethenjwa kufanele kubuswe yimithetho yesifunda lapho kubekwe khona, hhayi amandla omethembayo noma umzuzi. Lesi sigaba somthetho yiso esinikeza isivikelo sesahlulelo esenza ukuthi ukuthembela kolwandle kunxaneleke kangako.
Ungayibeka Kanjani i-Offshore Trust Yakho
Kunamazwe amaningi anezinzuzo ezinhle kakhulu zokuvikelwa kwempahla, kepha iliphi elungile kuwe? Impendulo yalowo mbuzo izoncika ekutheni yini ebaluleke kakhulu kuwe nokuthi yiziphi izimpahla ofuna ukuzivikela. The Phunyuka Umculi icaphuna izindawo ezisezingeni eliphezulu njengeseBelize, iziqhingi zaseCook, iNevis, iLuxembourg, iJersey, iziqhingi zaseCayman, kanye neziqhingi zaseBrithani.
Njengesakhamuzi sase-US, kungenzeka ukuthi iziqhingi zaseCook noma i-Nevis kube yisinqumo esingcono kakhulu kuwe. Lezi zindawo zombuso ezimbili zinolwazi kakhulu namakhasimende ase-US. Imithetho yabo ethembayo ibheka imithetho yase-US ekwakhiweni kwabo. INevis, i-Belize, iCayman Islands, kanye ne-Cook Islands yizona ezihamba phambili ezindabeni zentela. Imithetho yabo ethembayo isebenza ne-US Internal Revenue Code. Lokhu kwenza ukuthi kube lula ukuhambisana nentela nokubika. Akuwona wonke amazwe anabachwepheshe bezentela efanayo nalena.
Kodwa-ke, kungaba khona izinzuzo kwelinye izwe ezikhangayo kakhulu futhi ezifanele umsebenzi omncane owengeziwe ukusetha ukwethembana kwakho. Izidingo zomuntu ngamunye zihlukile, futhi kunezinhlobonhlobo ezinhle zezindlela ezingasogwini ukuze zihambisane nanoma yisiphi isidingo.
Ubumfihlo Nokuvikelwa Okudingayo
Akunandaba noma ngabe ukhetha yiphi izwe ukuvikeleka kwempahla yakho yaphesheya kwezilwandle, qiniseka ukuthi uthemba ochwepheshe ukukusiza ukuyilungisa. Imithetho ezungeze amathalente aphesheya kwezilwandle ingaba nzima, futhi amaphutha angabiza kakhulu. Sebenzisa imininingwane yokuxhumana kuleli khasi ukukhuluma nomunye wochwepheshe bethu bokuphatha phesheya kwezilwandle. Sizokusiza uqonde izinketho zakho, qiniseka ukuthi usebenzisa okungcono kakhulu amasu okuvikela impahla yasolwandle, futhi kukusize ukusetha ukwethemba kwakho. Singasiza futhi ukukuxhumanisa nommeli wethu ongaphakathi e-US ukuhlela zonke izindaba ezingaphesheya kwezilwandle ezingafika ngomgwaqo.